अराजकता देखिए सरकारले ‘बोल्ड स्टेप’ चाल्छ
अन्तर्वार्ता अराजकता देखिए सरकारले ‘बोल्ड स्टेप’ चाल्छ ईश्वर पोखरेल– संयोजक, उच्चस्तरीय समन्वय समिति
सरकारले मङ्गलबारदेखि देशभर लकडाउनको घोषणा गरेको छ । मङ्गलबार केही खुकुलो भए पनि बुधबार सुरक्षाकर्मीले निकै कडाइ गरिरहेका छन् । पास नभएका सवारी चल्न दिएका छैनन् । पैदल यात्रुले पनि बहाना पारेर बाहिरफेर निस्कन पाएका छैनन् ।
लकडाउनका कारण भित्री गल्लीका चोक बजारसमेत ठप्प भएका बेला कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई भ्याइनभ्याइ छ । आपूर्ति व्यवस्था कसरी सहज तुल्याउने, चिकित्सा सामग्री, यन्त्र, उपकरण कसरी ल्याउने, यथाशीघ्र प्रयोगशाला कसरी निर्माण गर्ने ? आदि प्रश्नले पिरोलिरहेको छ । अर्कोतिर एकपछि अर्कोगरी सङ्क्रमित फेला पर्न थालेकाले कोरोनाभाइरस फैलन नदिन उत्तिकै चनाखो हुनुपर्नेछ ।
विश्वव्यापी विपद् बनेको कोभिड–१९ नेपाललाई पनि टाउको दुखाइ बनेका बेला मन्त्री, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू पनि सङ्क्रमणको जोखमबाट बच्न आफैं पनि सतर्क रहनुपर्ने भएको छ । कारण– तालुकदार मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू सिंहदरबार ओहोदोहोर गरिरहेका छन् । अघिपछिको तुलनामा झन् बाक्लो आउजाउ छ ।
तसर्थ, कोरोनाभाइरसले उच्च प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा प्रवेश नपाओस् भनेर कडा सावधानी अपनाइएको छ । दक्षिणी गेटबाट छिर्नेबित्तिकै दायाँतर्फ सुरक्षाकर्मीले ज्वरो जाँच गर्छन् र स्यानिटाइजरमार्फत् किटाणुशोधन गरेरमात्रै भित्र प्रवेश दिन्छन् ।
मन्त्रालय, विभाग पुगेपिच्छे उही कृत्य दोहोर्‍याउनुपर्छ ।
उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने कार्यकक्ष नै प्राङ्गणमा ओरालेका छन् । मन्त्रालयको आँगन (पुतली बगैंचा)बाटै भेटघाट, संवाद र समितिका सदस्यहरूको कामको रिपोर्टिङ लिन थालेका छन् । मानिसहरूको भेटघाट, संवादबाट कोरोनाभाइरस आदान–प्रदान नहोस् भने भौतिक दूरी कायम गर्न थालेका छन् ।
बुधबार दिउँसो एक बजे सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडा समितिको नियमित बैठकका लागि पुगेका थिए । समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीसँग ब्रिफिङ लिइरहेका थिए ।
सङ्क्रामक कोरोना भाइरसका कारण सम्पूर्ण प्रणालीनै त्राहिमाम् भइरहेका बेला समितिका संयोजक पोखरेलसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानीः–
आइतबारसम्म सरकार, समितिको एकढङ्गको तयारी थियो, सङ्क्रमित फेला पर्न थालिसकेको अवस्थामा तपाईंहरूले के–कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?
कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले १२ वटा बैठक बसेर सङ्क्रमण फैलन नदिन आवश्यक निर्णय गरेको छ । त्यही निर्णयमा आधारित भएर समितिले आवश्यक कार्य सम्पादन पनि गरेको छ । थप योजना पनि बनाइरहेको छ । अहिले हामी ती योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएनभएको हेरिरहेका छौं । अनुगमन प्रभावकारी बनाइरहेका छौं ।
सङ्क्रमित देखा परिसकेकाले हामीले कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने तयारी गरेका छौं । यो अस्पताल थपनाका लागि थपना होइन । सङ्क्रमण न्यूनीकरण– निराकरण गर्न विशेष अस्पताललाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, अत्याधुनिक उपकरण जडान गर्ने, के–कस्तो प्रविधि अपनाउने, औषधि, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर हामीले आवश्यक योजना तर्जुमा गरिरहेका छौं ।
अहिले टेकुमा परीक्षण र उपचारको काम भइरहेको छ । टेकुले मात्रै पुग्दैन । अन्यत्र पनि त्यो क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेछ ।
यहीबीचमा हामीले कोरोनाको सङ्क्रण रोक्न, फैलन नदिन र उपचार गर्न सरकारी कोषको स्थापना गरेका छौैं । ५० करोड सरकारले हालेको छ । सहयोग गर्ने दाताहरूले सहयोग उपलब्ध गराउँदै हुनुहुन्छ । कोषमा पनि हामीले एकद्वार नीति लिएका छौं । अरूलाई कोष खोल्न दिएका छैनौं । जसजसलाई सहयोग गर्न मन लाग्छ, केन्द्रीय कोषमै दाखिला गर्नुहुन्छ ।
अहिले हामीलाई चाहिएको चिकित्सा सामग्री हो । हिजोसम्म आवश्यक थिएन, चलेकै थियो । आवश्यक परेका बेला बजारमा पाइन्थ्यो पनि । अहिले सङ्क्रमण विश्वव्यापी महामारी बनेको छ । सबै मुलुक सङ्क्रामक भाइरसबाट आक्रान्त छन् ।
सर्वत्र एकै हाल हुँदा अहिले चाहेजति, चाहेको किसिमले उपलब्ध हुन नसकेको हो ।
यसकारण जोडजाम गरेर हामीलाई चाहिनेजति सरसामग्री ल्याउने योजना बनाएका छौं । विमान चार्टड गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ या, कार्गो विमान लगेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ, सरकारले त्यसको आवश्यक बन्दोवस्त गरेको छ ।
चिकित्सा सामग्री कहिलेसम्म ल्याउनुहुन्छ, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी बिनासुरक्षा (कवच) सामग्री काम गरिरहेका छन् ?
शनिबारसम्म ल्याउने सरकारको तयारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहजै पाइन्थ्यो, आपूर्ति हुन्थ्यो भने तत्कालै ल्याउने कुरा हुन्थ्यो । तै पनि खोजखाज गरेर शनिबारसम्म हामीलाई चाहिने उपकरण, चिकित्सा सामग्रीहरू ल्याउने तयारी र त्यसको व्यवस्थापन मिलाएका छौं ।
हामीले मित्र राष्ट्र चीन र भारत सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं । उहाँहरूले पनि सहयोग गर्छौं भन्नुभएको छ । सबैतिर हाहाकार भएकाले छिटो ल्याउन समस्या भएको हो ।
लकडाउनकै अवधिमा भारतबाट भटाभट नेपालीहरू आए उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि के भइरहेको छ ?
सीमा क्षेत्रमा हामीले कोही नागरिकलाई अलपत्र पर्न दिएका छैनौं । दिँदैनौं पनि । लकडाउन नागरिककै सुरक्षाका लागि हो, नागरिकलाई दुःख दिनका लागि होइन ।
लकडाउनकै अवधिमा सूचना नपुगेर, या बाटामा रहेका नेपालीहरू सीमामा आइपुग्नुभयो । उहाँहरूलाई हामीले अन्तरिम व्यवस्था गर्‍यौं ।
भारतबाट आएका ती नेपालीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको समन्वयमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । त्यसको व्यवस्थापन पनि सम्बन्धित प्रदेशले गरेका छन् ।
अहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा मात्र परीक्षण भइरहेको छ, एकाएक सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्यो भने के गर्ने ?
अहिलेसम्म हामीसँग जम्माजम्मी एउटा ल्याब छ । अब धरान, धुलिखेल, पोखरा, नेपालगञ्जमा ल्याबको स्थापना गर्ने तयारीमा जुटेका छौं । आजको भोलि नै उपकरण जडान गर्न सम्भव छैन । ती ठाउँमा प्रयोगशाला स्थापना नहुञ्जेल विराटनगर, नेपालगञ्जमा स्वाब सङ्कलन हुनेछ । दैनिक एक फ्लाइट पूर्वमा विराटनगर, पश्चिममा एक फ्लाइट नेपालगञ्जसम्म जहाज पठाएर स्वाब सङ्कलन गर्ने र टेकु ल्याएर परीक्षण गर्ने बन्दोवस्त मिलाइएको छ ।
यस्तो डरलाग्दो महामारीको बीचमा पनि हामी दिनरात एकै बनाएर तयारी र कामहरूको विन्यास गरिरहेका छौं । यसमा सबै पक्ष गोलबन्द गर्ने, सबैपक्षसँग हातेमालो गरेर, मिलेर काम गर्ने तयारी छ । हामीले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी समूह, व्यवसायीहरूलाई एकताबद्ध बनाएर कोरोना सङ्क्रमणविरुद्ध जुध्न हामीले पहल, प्रयत्न गरिरहेका छौं । सबैको सकारात्मक साथ–सहयोग पनि पाएका छौं ।
सङ्क्रमितहरू एकपछि अर्को गरी फेला परिरहेकाले लकडाउन (बन्दाबन्दी)मा अझै कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ, आपूर्ति व्यवस्था कसरी मिलाउने तयारी छ त ?
आपूर्ति प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित र सहज बनाउने भन्ने चुनौति छ । अहिले नागरिकहरूमा भ्रम छ । हामीले उपभोग्य बस्तु, सामग्री बेचबिखन गर्ने पसल बन्द गर्नु भनेका छैनौं । खुलै राख्न भनेका छौं । तर व्यवसायीहरूले बन्द गरेर हिँडेका छन् ।
राज्यले कुनै निहुँमा अथवा आन्दोलनकारीले अगाडि सारेको कार्यक्रमका रूपमा कर्फ्यु लगाइन्छ, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न मानिसहरू ढाँचा पारेर सडकमा हिँड्छन् । कदाचित् यही किसिमको लापरवाही, अराजकता भयो भने सरकारले मुलुकको रक्षाका लागि, नागरिकको जीवनका लागि र भविष्य सुरक्षित तुल्याउन बोल्ड स्टेप (कडा कदम) चाल्नुपर्ने हुन सक्छ ।
नागरिकहरू आफैं सचेत हुनपर्ने हो । नागरिकको कर्तव्य, जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने हो । त्यस्तो कतिपय ठाउँमा देखिएको छैन । आम रूपमा राज्यले सरकारका तर्फबाट गरिएका कुरामा समर्थन छ । कतिपय ठाउँमा लापरवाही देखिएको छ । यस्तो लापरवाही हुन दिनु हुँदैन ।
माल–सामग्री, उपभोग्य बस्तु बजारमा पर्याप्त मौज्दात छ । त्यसलाई कसरी सिस्टमेटिक (प्रणालीगत) ढङ्गले आपूर्ति गर्ने, जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? यो एउटा समस्या छ ।
अहिले सरकारको ध्यान मूलतः दुईवटा कुरामा छ । एउटा आपूर्ति व्यवस्था कसरी सहज तुल्याउने ? अर्को सङ्क्रमण कसरी फैलन नदिने ?
अहिले सङ्क्रमित, एकजना, दुईजना जति देखिए पनि उपचार गर्ने प्रबन्ध मिलाएका छौं । उनीहरूबाट अन्य व्यक्तिमा सङ्क्रमण फैलन नदिन उत्तिकै सचेत छौं । सचेतनाका साथ काम गरिरहेका छौं । यसमा नागरिकको सहयोग उत्तिकै जरुरी छ ।
कोरोना सङ्क्रमित सबैलाई सरकारले नै उपचार गर्ने हो ?
कोरोना सङ्क्रमित सबैको उपचार सरकारले गर्छ । सरकारको कर्तव्य नै हो यो ।
कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिनुपरेन, अस्पतालहरूले ज्वरो आएका बिरामीसमेत लिन मानेका छैनन्, सरकारले थाहा पाएको छ कि छैन ?
केहीकेही भएको होला । त्यसलाई आमरूपमा बुझ्नु हुँदैन । अस्पतालहरू पनि व्यवस्थित छैनन् । उपकरण, चिकित्सा सुरक्षा सामग्री छैन । अनेक समस्या हुन सक्छन् । सङ्क्रमित रहेछन् भनेर अरूलाई पनि सर्ने भय हुन्छ । त्रासको अवस्था पनि होला । तर, स्वास्थ्य उपचारका लागि खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, विशेषज्ञहरूले त्यस्तो गर्नुहुँदैन । जिम्मेवारी र कर्तव्य बमोजिम काम गर्नुपर्छ ।
शङ्का लाग्नेबित्तिकै टेकु रिफर गरिहाल्नुहुँदैन ?
शङ्का लागेपछि जाँचबुझ गर्नुपर्छ नै । तर, हरेक अस्पताल, उपचार केन्द्रले त्यस्ता समस्या परेका व्यक्ति आउँदा उपचार गर्ने, जाँचपड्ताल गर्ने कुरामा निष्ठापूर्वक लाग्नुपर्छ ।
भारतले २१ दिन लडकडाउनको घोषणा गरेको छ, नेपालमा असर पर्छ नै, सरकारको के तयारी छ ?
नेपाल सरकार, उच्चस्तरीय समन्वय समितिले त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । हामीकहाँ के–कस्तो असर, प्रभाव पार्छ बुझेर आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।
मुलुकको लकडाउन लम्बिने सम्भावना कत्तिको छ ?
हामी विश्लेषण गरिरहेका छौं । सङ्क्रमणको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । परिस्थिति गम्भीर बन्दै गयो भने स्वाभाविक रूपमा यो लम्बिन्छ नै ।
नेपालमा पर्सनल प्रोटेक्टिभ ईक्विपमेन्ट (पीपीई) समेत नहुने अवस्था हो ?
हुँदै नभएको त कहाँ हो र ! पर्याप्त थिएन । भएकाले पुगेन । केही उत्पादन त भइराखेकै छ । सबैतिर लडकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थिति खडा भएपछि अभाव स्वाभाविकै हो ।
सर्वोत्तम सिमेन्टले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा लागु भएको नयाँ बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासनको तयारी गरिरहेको छ । माघ २ गते सम्पन्न... मंगलबार, चैत ३१, २०७७
काठमाडौं । कोभिड–१९ पछि सेयर बजारले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ । कारोबार रकम र बजार परिसूचकमा नयाँ नयाँ रेकर्ड... आइतबार, चैत २९, २०७७